UJEEDO: TACSI TIIRAANYO LEH « HiilDan.Com
Home › Tacsi(Condolences) › UJEEDO: TACSI TIIRAANYO LEH
UJEEDO: TACSI TIIRAANYO LEH By hiildan on May 14, 2012	• ( 0 )
Ururweynaha ARDAA isaga oo ka tiiraanyeysan geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Marxuum Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jowhar maalintii Axadii ee taariikhdu aheyd 05/13/2012, wuxu tacsi u dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo eheladii u ka geeriyooday Marxuum Dr.Cabdishakuur Sh Cali Jowhar.
Ururku wuxu tacsi gaar ah u dirayaa Raxma Sheekh Cabdilaahi Sheekh Cali oo ka tirsan Guddiga Sare ee ururka ARDAA, waxanan Eebe ka baryeynaa inuu Marxuumka janatul fardowsa ka waraabiyo , qoyskii, qaraabadii, ehelkii iyo asxaabtii u ka tagayna samir iyo iimaan ka siiyo. AAMIIN
Ururka ARDAA waa urur dalad guud ah, kuna saleysan hanaanka bulshada, isla markaana samafal ah. Waxa Lagu asaasay Waqooyiga Mareykanka sanadkii 2007 si ay taageero ugu fidiyaan mashaariicda horumarineed ee dhaqan-daqaale ee gobalada ADAL iyaga oo mideynaaya muruq iyo maalba, una fidinaaya tababar, wacyigeliyaana, horena u mariyaan hogaankooda iyo iney u doodaan xuquuqdooda aadamaninimo. About these ads
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« TACSI: Allaha U Naxariisto Dr C/Shakuur Sh Cali JawharTACSI: MARXUUM, DR. CABDISHAKUUR SHEEKH CALI JAWHAR »Categories: Tacsi(Condolences)	Related Articles